Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana ny Alberto Santos-Dumont | Steven Udvar-Hazy miaraka amin'ny raharaha Reincarnation an'ny Aida de Acosta | Christine Udvar-Hazy - Fikarohana Reincarnation
Trangam-panjakan'olo-tokana ao Alberto Santos-Dumont | Steven Udvar-Hazy miaraka amin'ny raharaha Reincarnation of Aida de Acosta | Christine Udvar-Hazy
Hita taratra amin'ny: Torolalana ho an'ny Fanahy na Fanahy Mitovy Ahtun ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw, 2005
Ny fiainan'i Alberto Santos-Dumont
Namako akaiky dia akaiky ny fianakavian'i Gonda any Los Angeles, izay mpiara-manorina International Lease Finance Corporation (ILFC), orinasa lehibe manofa fiaramanidina lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Ny Gondas dia nampiasa ny haren'izy ireo mba ho lasa philanthropists.
Nihevitra aho fa mahaliana ny hahazoana fiainana taloha Gondas, amin'ny ampahany - mba ho marin-toetra, satria nanantena aho fa mety ho liana amin'ny fanohanana ny fikarohana momba ny vatana vaovao indray. Tamin'ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson dia nilaza tamiko i Ahtun Re fa ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona Gonda dia mpisava lalana fiaramanidina Breziliana iray izay nanidina azo naleha tany Paris nanodidina ny Eiffel Tower. Tamin'izany fotoana izany dia tsy fantatro izay tiany horesahina. Tamin'ny famotopotorana kely dia hitako fa ilay noresahiny Alberto Santos-Dumont.
Santos-Dumont dia nihalehibe tao amin'ny toeram-pambolena kafe tany Brezila. Talanjona tamin'ny milina fambolena i Young Alberto ary nandany fotoana tamin'ny mekanikan'ny rainy hianatra ny fomba fiasan'ireto milina ireto. Nesoriny ny masinina ary avy eo natambany indray ireo sanganasa hahafehy ny injenieran'izy ireo.
Rehefa nanjary liana tamin'ny fiaramanidina izy dia nampiasa ny fahalalàny ny motera mba hamoronana sasantsasany amin'ireo fiaramanidina matanjaka voalohany manerantany, ao anatin'izany dirigibles izay nampiasa balaonina lehibe iray ho an'ny fiakarana sy ny motera milina iray. Io karazana fiaramanidina io no nampiasan'i Santos-Dumont tamin'ny hazakazaka an'habakabaka iray tany Paris, izay tena niverenany nanodidina ny Eiffel Tower. Taty aoriana dia namolavola izy ary nanidina ilay fiaramanidina voalohany mavesatra-haingam-pandeha amin'ny fotoana mitovy tamin'io fotoana nanandraman'ny Wright Brothers tamin'ny milina fiaramanidina io.
Rehefa nampitahaiko ny fiainan'i Alberto Santos-Dumont tamin'ny fiainan'i Leslie Gonda sy ny zanany lahy, Louis Gonda, mpikamban'ny IFLC, dia tsapako fa tsy nifanaraka tamin'i Santos-Dumont tamin'ny toetra na endrika izy ireo. Na dia an'ny fiaramanidina Gondas aza dia tsy mpanamory fiaramanidina izy ireo ary tsy mitovy amin'ny Santos-Dumont. Gaga aho tamin'ny tsy fitovian-kevitra.
Ny fiainan'i Steven Udvar-Hazy
Tonga ny fihenam-bidy rehefa fantatro fa nisy mpanorina mpiara-miasa iray voalohany IFLC, Steven Udvar-Hazy. Udvar-Hazy nandany taona an-taonany niaraka tamin'ny mekanika fiaramanidina tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Los Angeles (LAX). Fotoana tsy manam-paharoa kokoa no nahafahan'ny zazalahy iray niditra tao amin'ny mpanantona fiaramanidina tsy nisy fandroahana fiarovana.
Fony mbola zatovo i Steven dia nanjary manam-pahaizana momba ny mekanika fiaramanidina sy ny tanjaka sy ny lesoka tamin'ny endriny tsirairay amin'ny fiaramanidina. Tamin'ny faha-17 na 18 taonany dia niantoka ny fifanarahana fampanofana fiaramanidina voalohany izy, satria tsy tsapan'ireo antoko voarohirohy fa ny mpanolotsain'izy ireo tamin'ilay fifanarahana, izay tsy nifankahitan'izy ireo mivantana akory, dia tsy nahazo diplaoma tamin'ny oniversite akory.
I Steven no naharesy lahatra ny sakaizany, Louis Gonda, niaraka tamin'ny rain'i Louis, Leslie, hiara-hiasa amin'ny fananganana ILFC. Steven koa dia lasa mpanamory fiaramanidina nahomby ary tamin'ny farany dia hanidina ny Gulf Stream 5 azy manokana, raisina ho toy ny Rolls Royce an'ny fiaramanidina manokana. Nampiasa ny harenany i Steven taty aoriana mba hanampy azy hahita ilay Museum momba ny habakabaka sy ny habakabaka Smithsonian.
Ny endriny ara-batana misy eo amin'i Alberto Santos-Dumont sy Steven Udvar-Hazy dia somary manaitra ihany. Amin'ny tranga reincarnation, ny lehilahy dia matetika nojerena mba hitazonana ny volo mitovy hatrany amin'ny fiainana mandra-pahafatiny ary amin'ity tranga ity dia tsikaritray fa ny Alberto sy Steven dia manao fanatanjahantena mitovy. Nandritra ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, i Ahtun Re dia nanamafy fa Steven Udvar-Hazy no reinkarnation an'i Alberto Santos-Dumont.
Christine Udvar-Hazy amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao ny fitiavan'i Alberto Santos-Dumont, Aida de Acosta
Alberto Santos-Dumont dia tia ny vehivavy antsoina hoe Aida de Acosta. Navelany hanidina ny iray amin'ny habakabaka, izy izay hany olona nomeny tombontsoa toy izany. Nandeha ny fiaramanidina Number 9 izy ary nanao izany, dia izy no vehivavy voalohany nanamory fiaramanidina mahery vaika. Nataony teo ambony latabany ny sariny mandra-pahafatiny. Aida nanambady, hany ka tsy vita ny fifandraisan'izy ireo.
Ahtun Re dia nanamafy fa ny Aida de Acosta dia nanangana indray tamin'ny maha-vadin'i Steven Udvar-Hazy, Christine Udvar-Hazy.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Tsy miovaova ny endri-javatra sy ny volon-tànan'i Alberto Santos-Dumont ary Steven Udvar-Hazy.
Ny endri-javatra endrik'i Christine Udvar-Hazy sy Aida de Acosta dia mitovy avokoa.
Ny fiainana taloha talenta: Santos-Dumont sy Udvar-Hazy dia nizara fahalianana be loatra amin'ny fitaovana mekanika, indrindra amin'ny fiaramanidina. Nampiasa ny fahalalany mekanika i Santos-Dumont ho mpisava lalana fiaramanidina, fa i Udvar-Hazy kosa dia nampiasa ny fahalalany mekanika hanampiana ny orinasa mpanofa fiaramanidina lehibe indrindra manerantany. Santos-Dumont dia iray amin'ireo mpanamory fiaramanidina voalohany eran'izao tontolo izao ary Udvar-Hazy dia mpanamory fiaramanidina mahay.
Fanovana ny fiarahamonina Nasionaly sy ny fiarahamonina Ethique hatramin'ny Fahaiza-miaina Fahatongavana ho an'ny hafa: Teraka tany Brezila i Alberto-Santos-Dumont ary nifindra tany Paris, izay nametrahany ny tenany ho mpitarika ny sidina. Steven Udvay-Hazy dia teraka tany Hongria ary tonga tany Etazonia nandritra ny vanim-potoana Sovietika. Nipetraka tao amin'ny faritr'i Los Angeles izy, ary lasa nandeha tamina fiaramanidina.
Mamono Tena: Namorona aretina mafy i Alberto Santos-Dumont, noheverina fa noho ny sclérose marobe. Tsy sahy koa izy tamin'ny fampiasana fiaramanidina amin'ny ady. Vokatry ny fahaketrahana mafy dia azo inoana fa namono tena tamin'ny alàlan'ny fanantonana ny tenany izy.
Fifandraisana vaovao amin'ny alàlan'ny Reincarnation: Ny fifandraisan'i Alberto Santos-Dumont an'i Aida de Acosta dia tanteraka tamin'ny fanambadiany tamin'i Christine vadiny.